यो भिडियोले पक्राउ परे रवि लामिछाने, चितवन प्रहरी ६ बजे आइपुगेको थियो काठमाडौं | Ratopati
यो भिडियोले पक्राउ परे रवि लामिछाने, चितवन प्रहरी ६ बजे आइपुगेको थियो काठमाडौं
personसुजन पन्त exploreकाठमाडौं access_timeसाउन ३०, २०७६ chat_bubble_outline2
काठमाडौं । प्रहरीले टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणसँग जोडिएका लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की पक्राउ परेका हुन् ।
नुवाकोटका पत्रकार पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि भन्दै उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
पत्रकार पुडासैनी २०७६ साउन २० गते चितवनको होटल कंगारुको कोठा नम्बर २०२ मा झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएका थिए । उनले आत्महत्या गर्नु अघि रुँदै आफैंले मोबाइलमा दुई वटा भिडियो बनाएका थिए ।
यो विषयमा चितवन प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
चितवन प्रहरीले रविलाई नियन्त्रणमा लिन काठमाडौं परिसरको सहयोग मागेको पाइएको छ । चितवन प्रहरी र परिसरको टोली साँझ ७ बजेतिर न्यूज २४ टिभीको कार्यालय पुगेको थियो ।
१५ मिनेट जति प्रहरीले रविसँग केही छलफल गरेपश्चात नियन्त्रणमा लिइएको पाइएको छ ।
रवि र युवराजलाई नियन्त्रणमा लिएलगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले एक विज्ञप्ति जारी गरेर उनीहरुको पक्राउ परेको पुष्टि गरेको छ । विज्ञप्तिमा रवि र युवराजलाई न्यूज २४ को कार्यालयबाट र कार्कीलाई
कलंकीबाट पक्राउ गरेको उल्लेख गरेको छ ।
भिडियोमा करिब १० मिनेटभन्दा बढी पत्रकार पुडासैनीले आफ्नो मृत्युको कारणबारे खुलाएका छन् । उनले भिडियोका अन्त्यमा रुँदै भिडियोमा श्रीमती सम्झना र आमाबुवासँग माफी समेत मागेका छन् ।
#rabi lamichhane#salikram pudasaini#yuvraj kandel
Aug. 16, 2019, 7:41 a.m. Prasanta
yo ravi lamichane guu ho bhan ne ta thaha thiyo tara yesto maha ganaune guu ho bhan be chai bal la tha bho.
Aug. 16, 2019, 4:50 a.m. भगवान घिमिरे
रवि लामिछानेको गिरफ्तारी भयो भन्दा दुख लाग्यो। शालिकराम पुडासैनीले मर्नुअघि रेकर्ड गरेको भनिएको भिडियोमा रवि लामिछाने,युवराज कंडेल र रुकु भनिने अस्मिता कार्की नामकी युवतिको अत्यधिक टर्चरका कारण उनले आत्महत्या गर्न पुगेको भनेर उनिहरुलाई दोषी ठहर्याएका रहेछन्। तर मलाई त रवि लामिछानेले त्यस्तो अपराध गरेहोला जस्तो त लाग्दैन। हुन त सर्सर्ती भिडियो हेर्दा नपत्याउँ पनी कसरी भन्ने लाग्छ भिडियो मै पनी कतिपय संका गर्न सकिने ठाउँ छन्। तर भिडियो गर्ने मान्छे जसरी पनी मारिने भएपछी त्यो भिडियो बनाउनकालागी कतिसम्म हतकण्डा अपनाइयो होला हामी आफैँ अनुमान लगाउन सकिन्छ। शालिकरामको बलि चढाएर रविको पत्तासाफ गर्ने ग्राण्ड डिजाइन नहोला भन्न सकिन्न। किनकि शालिकराम अब फर्केर "मलाई टाउकोमा गन तेर्स्याएर रविका विरुद्ध बोल्न बाध्य पारिएको" भन्न आउने छैनन्। र उनले भनेका उद्योगी र व्यापारी हरु पनी ज्युँदै होलान् उनिहरुले पनी करोडौँ असुल्ने रविका विरुद्ध कहीँ न कहीं मुख फोर्नुपर्ने हो। पुलिसको छानबीन प्रति पनी विश्वास लाग्दैन किनकि पुलिसले भिडियो लाई नै प्रमाण मान्ने हो भने पनी निर्मलाको बलत्कार गरेर हत्या गरेकै हो भनेर दिलीप विष्टले स्विकारेको भिडियो अहिलेपनि हेर्न सकिन्छ तर पनी दिलिप विष्टलाई चाहीँ किन निर्दोष ठहर्याएको ? अनि रवि विरुद्धको भिडियो चाहीँ प्रमाण हुने कस्तो कानून हो ??? तर्क गर्योभने जतिपनी हुन्छ। रवि माथि ठूलै षड्यन भएनहोला भन्न पनी सकिन्न किनकि अमेरिकाको ऐस आरामको जिन्दगी छोडेर यो देश बनाउनका लागी भन्दै देशका धमिराहरु भ्रष्टाचारी, घुस्याहा,गुण्डा, दलाल माफिया हरूको निद हराम गरिदिएका थिए रविले। देशभित्र मात्रै नभएर संसारभर छरिएर रहेका दुखमा परेका नेपालीहरुका ढुकढुकी थिए उनी। पुलिस प्रशासन र सरकारलाई समेत टाउको दुखाई भएको थियो रवि लामिछानेको सिधाकुरा जनतासंगको कार्यक्रम। पुलिस प्रशासन भित्रकै काला कर्तुतका भण्डाफोर गरेका थिए। सरकारका कमिकमजोरी प्रति औँला ठड्याएर सतर्क गराइरहन्थे। तीन करोड़ नेपाली सविको साथमा छन् भनेपनी उनले देशमा विद्यमान बिकृतिका विरुद्ध लड्ने क्रममा थुप्रै हाई प्रोफाइल शत्रुहरु समेत कमाएका थिए। यसैपनी रवि लामिछानेको नाम बेचेर,भजाएर कैयौँ मिडियाहरुले अनेक चाहिँदो नचाहिँदो समाचार र युट्यूब भिडियो बनाइ बनाइ पैसा कमाइरहेका थिए अब झन् ति अनलाइन मिडिया र युट्यूबे हरुलाई त दशैँ आए जत्तिकै भएको छ। अब दिन दिनै रवि लामिछाने सम्बन्धि समाचार र भिडियो भाइरल बनाएर डलर कमाउने साइत जुरेको छ उनिहरुलाई बधाई छ । अब पक्राउ परिसकेपछी जेजसो भएपनी छानबीन निष्पक्ष होस, यदि उनी दोषी नै रहेछन् भने अन्धभक्त भएर दोषीलाई कारवाई नहोस् चाहीँ भन्नु हुँदैन। हामी आफैं वकिल बनेर यहि हुनै पर्छ भन्ने कुरा त भएन तर मनमा लागेको कुरा दुइचार शब्द उनको बिषयमा लेखेको।